Sina mangina indostrialy sentrifugal rano evaporative rivotra cooler XK-20S orinasa sy mpamatsy | XIKOO
XK-20S moana indostrialy centrifugal rano mangatsiaka rivotra mangatsiatsiaka cooler no indostrialy malaza indrindra cooler sentrifugal. Ary misy fiakaran'ny rivotra miakatra, midina ary mankarary apetraka amin'ny rindrina, tafo ary toerana hafa. Azo ampangatsiahana ny zavamaniry 60-80m2 amin'ny faritra mando ary zavamaniry 150-200m2 amin'ny faritra maina.
XK-20S moana indostrialy sentrifugal rano mangatsiatsiaka fampangatsiahana rivotra misy faritra kalitaon'ny indostrialy ary manana feactures etsy ambany:
• LCD tontonana + fanaraha-maso lavitra, hafainganam-pandeha 12. voltase / dingana misokatra ankehitriny fiarovana, fiarovana amin'izao fotoana izao, fiarovana amin'ny alàlan'ny herinaratra, fiarovana ny tsy fahampian'ny ranoion sy fiasan-drano mandeha ho azy tanteraka. Mora ny miasa sy mihazakazaka tsy tapaka.
• Centrifuge mitambatra mivantana, mihazakazaha milamina kokoa, tsy misy fehin-kibo tanteraka, fanontaniana vaky sy tabataba be.
• Motera tariby varahina 100% miaraka amina kabinetra vy mavesatra, manomboka sy mandeha tsara.
• Kabary plastika PP vaovao tanteraka, fanoherana ny fahanterana, fanoherana UV, tsy harafesina intsony, androm-piainana faharetana.
• Miaraka amin'ny kalitao fampangatsiahana 5090 # avo lenta (100mm), ny vokatra tsara entin'ny etona sy ny fihenan'ny maripana, mora diovina, voaaro ary mahazaka maharitra.
• Ny fantsom-pisokafana misy karazana rano misokatra miaraka amin'ny rafitra fizarana rano dia miantoka ny famafazana azy rano milamina sy milamina.
XK-20S / midina
XK-20S / lafiny
XK-20S / miakatra
Fampiharana: XK-20S moana indostrialy sentrifugal rano mangatsiaka rivotra cooler manana ny fampangatsiahana, hamandoana, fanadiovana, angovo fitehirizana asa hafa, ary koa ny moana vokatry, be mpampiasa ho an'ny atrikasa, toeram-pambolena, trano fanatobiana entana, trano fandraisam-bahiny, gara, tsena sy toerana hafa.
Teo aloha: Ny hatevin'ny rivotra mangatsiaka 12cm vaovao dia mangatsiaka kokoa XK-18/23 / ST
Manaraka: rafitra fampiroboroboana fantsona fantsom-panafody vaovao XK-25H
Air Cooler mihetsika
atrikasa fampiroboroboana indostrialy etona Chin ...